မြန်မာဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအပေါ် တရုတ်၏ သြဇာ မှေးမှိန်သွားပြီလော | Save Burma
အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးမှ တတိုင်းပြည်လုံး စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ခံစားရမယ် မြန်မာဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအပေါ် တရုတ်၏ သြဇာ မှေးမှိန်သွားပြီလော
မုံပီး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ 21 2009 13:22 – မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခိုင်မာဆုံးမဟာမိတ် တရုတ်နိုင်ငံသည် အုပ်ချုပ်သူ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအပေါ် သြဇာရှိသည့် တခုတည်းသော နိုင်ငံဟု နိုင်ငံတကာက ထင်မှတ်သော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများသည် သူတို့၏ အကိုကြီး တရုတ်နိုင်ငံက ပြောသည်ကို လိုက်မလုပ်ဘဲ ခေါင်းမာနေသည့်အတွက် တရုတ်အနေဖြင့် ခက်ခဲသော အခြေအနေတရပ် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း အကဲခတ်တဦးက ဆိုလိုက်သည်။
အကြံပေးချက်များကို လိုက်နာရန် ခေါင်းမာစွာ ငြင်းဆန်နေသည့်အတွက် တရုတ်အနေဖြင့် လောလောဆယ်တွင် တင်းကျပ်သော အနေအထားတွင် ရောက်ရှိနေကြောင်း နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ် ရွှေလီမြို့တွင် နေထိုင်ကာ တရုတ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးကို ကြာမြင့်စွာ အကဲခတ်လေ့လာနေသူ ဦးမြမောင်က ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
တရုတ်၏ အကြံပြုချက်များတွင် အတိုက်အခံများနှင့် အားလုံးပါဝင်သည့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ရန်နှင့် စစ်အစိုးရက မေလဆန္ဒခံယူပွဲတွင် အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုနေသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြန်လည်စဉ်းစားရန်တို့ အံ့အားသင့်စရာ ကောင်းလောက်အောင် ပါဝင်နေသည်ဟု သူက ပြောသည်။
ဦးမြမောင်က “ဒါပေမဲ့ ခက်နေတာက တရုတ်အတွက်လည်း သူ့အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားက ရှိနေတော့ စစ်အစိုးရအပေါ် အပြင်းအထန် ဖိအားပေးဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး” ဟု ပြောသည်။
တရုတ်က မြန်မာထံမှ လိုချင်နေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ယူနန်ပြည်နယ်သို့ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း သွယ်တန်းရေးနှင့် စစ်တွေဆိပ်ကမ်းကို ပင်လယ်ထွက်ပေါက်အဖြစ် အသုံးပြုခွင့်ရရေးတို့မှာ အရေးပါသည်ဟု သူက ဆိုသည်။
“တရုတ်က စစ်အစိုးရရဲ့ လမ်းပြမြေပုံကို ထောက်ခံတယ်လို့ ထင်စရာရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့အတွက် ပိုအရေးကြီးတာက တိုင်းပြည်တွင်းမှာ တစုံတရာ တည်ငြိမ်မှုရှိနေဖို့ပဲ” ဟု ဦးမြမောင်က ပြောသည်။
စစ်အစိုးရအပေါ် စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများ ချမှတ်သည့် အမေရိကန်နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ လုပ်ရပ်ကို အပြင်းအထန် ဆန့်ကျင်ခဲ့သော တရုတ်နိုင်ငံအတွက် ကုလသမဂ္ဂ၏ ကြံဆချက်များမှာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အဖြေရှာရေးအတွက် စံကျသော တွေးဆချက်များဖြစ်သည်ဟု တရုတ်က ရှုမြင်သည်ဟု သူက ပြောသည်။
တရုတ်က ဆက်ဆံရေးမူဝါကို ယုံကြည်သော်လည်း တာဝန်ခံမှုရှိပြီး အင်အားကောင်းကာ တည်ငြိမ်သည့် အစိုးရတရပ် ရှိစေလိုသည်ဟုလည်း သူက ဆိုသည်။
လတ်တလောတွင် အမေရိကန်နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂက မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများ ချမှတ်အရေးယူထားသည်။
ဦးမြမောင်၏ သုံးသပ်ချက်ကို ထောက်ခံသည့် လျှို့ဝှက်အစီရင်ခံစာ တစောင်ကိုလည်း မဇ္ဈိမက ရရှိထားသည်။ ထိုအစီရင်ခံစာအရ မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး မစ္စတာကျွမ်းမူ (Juan Mu) က မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် ယမန်နှစ်အစောပိုင်းက တွေ့ဆုံရာတွင် ကုလအထူးသံတမန် မစ္စတာအီဘရာဟင် ဂမ်ဘာရီနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သူ့အကြံပြုချက်များကို လိုက်နာလုပ်ဆောင်ပါရန် မြန်မာအစိုးရကို တိုက်တွန်းခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းနှင့် တရုတ်သံအမတ်ကြီးတို့၏ တွေ့ဆုံပွဲအစည်းအဝေး မှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ မစ္စတာဂမ်ဘာရီ၏ ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု အခန်းကဏ္ဍကို ပိုမိုမြှင့်တင်ပေးသည့်အနေနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နှင့် မစ္စတာဂမ်ဘာရီတို့ သုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံခွင့်ပေးရန်နှင့် သူ့ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ အကြိမ်ကြိမ် ဝင်ရောက်ခွင့် ဗီဇာပေးရန်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆက်သွယ်ရေးရုံး ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးရန်တို့ကို ဦးဉာဏ်ဝင်းအား တရုတ်သံအမတ်ကြီးက တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂ၏ ကြံဆချက်များကို ထောက်ခံကြောင်းနှင့် အထူးသံတမန် အီဘရာဟင်ဂမ်ဘာရီကို လိုအပ်သော ထောက်ပံ့ကူညီမှုများ ပေးအပ်ရန် အသင့်ရှိကြောင်းလည်း သံအမတ်ကြီး မစ္စတာကျွမ်းမူက ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော် စစ်အစိုးရအကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ နောက်ထပ် ရုပ်သေးရုပ် တရုပ်မျှသာဖြစ်သော နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဂမ်ဘာရီ၊ ဦးအောင်ကြည်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ သုံးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံခွင့်ပေးရေး မေတ္တာရပ်ခံချက်ကို မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောဆိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး၊ စစ်အစိုးရ အငယ်တန်း တာဝန်ရှိသူ အရာရှိများနှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရရေးကိစ္စကိုမူ အာမခံခဲ့သည်။
ထို့ပြင် မစ္စတာဂမ်ဘာရီကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ အကြိမ်ကြိမ် ဝင်ရောက်ခွင့်ဗီဇာကို စစ်အစိုးရကို ခွင့်မပြုနိုင်ကြောင်းနှင့် ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆက်သွယ်ရေးရုံးတရုံး ဖွင့်လှစ်ခွင့်လည်း မပေးနိုင်ကြောင်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက မစ္စတာကျွမ်းမူနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော် တရုတ်နိုင်ငံ၏ သဘောထားကို ကိုယ်စားပြုသူ တရုတ်သံအမတ်ကြီး မစ္စတာကျွမ်းမူကမူ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာ့အခြေအနေကို နားလည် သဘောပေါက်ပါကြောင်းနှင့် စစ်အစိုးရက စီစဉ်ထားသော လမ်းပြမြေပုံကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ သံတမန်အသိုင်းအဝိုင်း နားလည် သဘောပေါက်စေရန် မိမိတို့၏ အရှိန်အဝါသြဇာကို အသုံးပြုပြောကြားပေးပါမည်ဟု မစ္စတာကျွမ်းမူက ဦးဉာဏ်ဝင်းကို ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် တည်ငြိမ်သော မြန်မာနိုင်ငံကို မြင်တွေ့လိုသော်လည်း မကြာသေးခင် ရက်များအတွင်း စစ်အစိုးရအပေါ် သြဇာမရှိဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟု ဦးမြမောင်က ပြောသည်။ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလှသော နာဂစ်ဆိုင်ကလုံး မုန်တိုင်းအပေါ် တုံ့ပြန်မှုကိစ္စအပါအဝင် ကိစ္စတော်တော်များများတွင် ထိုသို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ခေါင်းဆောင်သည့် စစ်အစိုးရအပေါ် မိမိတို့၏ သြဇာအရှိန်အဝါကို သုံးစွဲရာတွင် မအောင်မမြင် ဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။
“ဒါဟာ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေအပေါ် သြဇာအရှိန်အဝါ အများကြီးရှိတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတောင်မှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ ဆက်ဆံရာမှာ ခက်ခဲကျပ်တည်းလာနေပြီ ဆိုတာကို ပြတဲ့ လက္ခဏာတရပ်ပဲ။ သူတို့အနေနဲ့လည်း သူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက် ပြန်ပြီး စဉ်းစားရတော့မယ့် အခြေအနေဖြစ်လာနေပြီ” ဟု ဦးမြမောင်က နိဂုံးချုပ် ပြောကြားသွားသည်။
မှတ်ချက်၊ မဇ္ဈိမသို့ ဝင်ဖတ်ရန် အခက်အခဲရှိသူများအတွက် အပြည့်အစုံ ပြန်လည်ဖော်ပြပါသည်။
Written by Lwin Aung Soe January 21, 2009 at 1:16 pm
Tagged with ကုလသမဂ္ဂ, တရုတ်, နအဖ, မြန်မာ	« Barack Obama
World focus on Burma (21 January 2009) »
Recent Posts (Save Burma – new site)မြန်မာ့နိုင်ငံရေး တနေ့တခြား သိမ်မွေ့နက်ရှိုင်းလာနေ November 22, 2011ရပ်/ကျေး ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေး ဥပဒေ မရှိသင့် November 22, 2011ကျုံးကို ဖောက်ထွက်နိုင်မယ့် ဆင် November 12, 2011ခေတ်သစ်မြန်မာကို တည်ဆောက်ကြသည့်အခါ November 7, 2011အစိုးရဆိုတာ လွှတ်တော်ကို အခြေခံထားရတာဖြစ်လို့ ဘာလုပ်လုပ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပဲ လုပ်ပါ။ October 18, 2011ကမ္ဘာ့လူရမ်းကားကြီး တရုတ်ရဲ့ ၂၁ ရာစု ကျုးကျော်နယ်ချဲ့ရေး မဟာဗျူဟာမှာ ပထမ ပစ်မှတ်က မြန်မာပြည် October 4, 2011မတရားသော တည်ဆဲဥပဒေများကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးနေခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီ၏ အနုတ်လက္ခဏာ October 2, 2011ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွင် လူထုဆန္ဒပြခြင်းသည် မဆန်းပါ။ September 26, 2011ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများအား ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ ၀န်ကြီးဌာနလေးခုနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ကော်မတီလေးရပ်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း တိုက်တွန်းပြောကြား September 15, 2011မည်သည့် ကန့်ကွက်မှုများ ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကို ဆက်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘယ်တော့မှ နောက်ဆုတ်မည် မဟုတ်ကြောင်း အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်းပြောကြား September 15, 2011Top Posts	တခုလပ်တယောက်ရဲ့ ပေါက်ကွဲသံစဉ်များ	Than Shwe, Voodoo and the Number 11	(1) English Section
Mizzima (Burmese)တရုတ်တက္ကသိုလ်များအနေဖြင့် ကွန်မြူနစ်ပါတီအား ဝိုင်ရံရမည်ဟု ရှီကျင့်ဖျင်ပြော December 9, 2016ရခိုင်ဒေသအတွက် နိုင်ငံတကာ အကူအညီများဝင်ရောက်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားခြင်းမရှိ ဟု ဦးဇော်ဌေးပြော December 9, 2016VOA သတင်းထောက် ဒေါ်အေးအေးမာ ထိုင်းအစိုးရ၏ လူသားအကျိုးပြုဆု ချီးမြှင့်ခံရ December 9, 2016အသားမာ အထားခံတဲ့ ဈေးကွက်ဝင် စတော်ဘယ်ရီစိုက်ကြရအောင် အပိုင်း (၃) December 9, 2016ကျေးရွာအတွင်း ဆက်သွယ်ရေး တာဝါတိုင် တည်ဆောက်မှုအား ရွာသားများ ကန့်ကွက် December 9, 2016သက်ဝင်လှုပ်ရှား ရန်ကုန်မြို့လမ်းမများ ပွဲတော် နှစ်ရက် ကျင်းပမည် December 9, 2016တောင်ကိုရီးယားသမ္မတအား စွပ်စွဲပြစ်တင်ရေးအဆို လွှတ်တော်တွင် မဲခွဲမှု အောင်မြင် December 9, 2016ပရိတ်သတ်များအား အံ့သြသင့်စေခဲ့တဲ့ တေလာဆွစ်နှင့် ဇိန်းမာလစ်တို့ အတူဆိုထားတဲ့ သီချင်းသစ် December 9, 2016 VOA (မြန်မာ)An error has occurred; the feed is probably down. Try again later. စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အားAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later.လူထုအသံ	RFA (Burmese)မန္တလေးအစိုးရရဲ့ ရသုံးမှန်းခြေ စာရင်းက ကျပ်သိန်းပေါင်း သုံးသောင်းကျော်ကို တိုင်းလွှတ်တော် ဖြတ်တောက်လူမှုဝန်ထမ်းနဲ့ AAPP ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ကလေးမြို့က လယ်ယာမြေတွေ အတွက် မျှဝေခြင်းအစီအစဉ်နဲ့ သိန်းနှစ်ထောင်ကျော် ကူညီမယ်တိုင်းရင်းသားစာပေ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဆိုကို မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီး အကောင်ထည်မဖော်ဘူး လို့ ဝေဖန်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီနဲ့ စည်းလုံး ညီညွတ်ရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီပါတီ မဟာမိတ်အဖြစ်က ရပ်စဲEleven မီဒီယာက ဒုတိယအကြိမ် အာမခံလျှောက်ထား Burma Digest InfoHello world! December 8, 2016 Mizzima (English)Diplomatic Missions issue statement on humanitarian access to northern part of Rakhine State December 9, 2016Special Adviser to the Secretary-General on Myanmar reiterates concerns over Northern Rakhine State December 9, 2016Thais book Suzuki final spot with Myanmar demolition job December 9, 2016Six Wa drug traffickers die in gunfight with Thai army December 9, 201611 killed in northern Myanmar rebel clashes: state media December 9, 2016Saw Tha Wah December 8, 2016Explaining Myanmar’s foreign policy behaviour: Domestic and international factors December 8, 2016Catholic church hit in ongoing fighting in Shan State December 8, 2016 BBC (Burmese)သမ်မတအိုဘားမား ကုလညီလာခံမှာ IS အန်တရာယျ ပွောမွနျ​မာ့​စီးပှား​ရေး​ဖို​ရမျ USကငျြးပပွငျ​သဈ​တဈ​ဦး အသတျ​ခံ​ရ​တာ အတညျ​ပွု RSF AsiaAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later. CNN WorldThousands flee to western Aleppo as Syrian army takes over December 8, 2016As the Syrian army continues to fight its way through the old city of Aleppo, the tide of those fleeing for their lives has becomearaging flood, an avalanche.Aleppo: UN fears for 100,000 trapped civilians, missing men December 9, 2016Hundreds of men are allegedly missing after crossing from rebel-held eastern Aleppo to the government-controlled west, the United Nations said Friday, as it voiced deep concern for the fate of some 100,000 civilians still trapped in the east.Why Aleppo is so important in Syria December 8, 2016It's been ravaged by violence for years, and if Aleppo falls now it could markaturning point in Syria's civil war.7-year-old in Aleppo tweets she's 'trapped by bombs' December 7, 2016The family ofa7-year-old girl who has captured the world's imagination with her heartbreaking tweets from Aleppo says the Syrian army has taken control of their area of the city.Voices from Mosul: 'Hope is Fading' December 9, 2016When Iraqi troops launched the offensive to retake Mosul from ISIS in late October, many families in the city were hopeful. After two years living under the militant group's draconian rule, they believed they would be freed inamatter of days.Over 1,000 Russian athletes benefited from 'state-sponsored doping' December 9, 2016More than 1,000 Russian athletes across 30 sports -- including football -- benefited from state-sponsored doping, according to the latest findings ofareport commissioned by the World Anti-Doping Agency.South Korea's parliament votes to impeach President Park December 9, 2016Lawmakers in South Korea's National Assembly voted overwhelmingly Friday to impeach President Park Geun-hye overacorruption scandal. The vote was 234-56, with six abstentions.Survivors of Haiti's rape crisis December 9, 2016Gisele stands behindatall plant with vibrant pink flowers. Her face is hidden, her hands are raised toward the sky. Marie sits inariverbed while her white dress floats in the water. You can see the goosebumps on her skin. Viviane lies inapatch of sun withajournal resting on her face. IPS Top newsWomen Human Rights Defenders: Targeted for Identity and Activism December 9, 2016Enough Is Enough December 9, 2016Corruption Control–Is It Feasible oraFantasy? December 9, 2016Why Achieving Sdg Goal 8 on Decent Work and Economic Growth Is Critical for Kenya December 9, 2016Anti-Torture Law Helps Pay Off Chile’s Debt to Human Rights December 8, 2016Fiscal Austerity Has Been Blocking Economic Recovery December 8, 2016Gambia May Not Join African Withdrawals from ICC December 8, 2016Resilient People & Institutions: Ecuador’s Post-Earthquake Challenge December 8, 2016Meta	Register	Log in
WordPress.com	Visitors	Blog at WordPress.com. %d bloggers like this: